Epont 2T Double Ram Bottle Jack oo la Habeeyay oo leh Safety Valve saarayaasha Shiinaha | EPONT
Laga soo bilaabo 2006, EPONT Jack waa soo saaraha qalabka dayactirka baabuurta ee xirfadleyda ah
Qalabka Kale ee Wax-qaadista
Soo bandhig jaakadda biyo-xidheenka caadiga ah ee ku saabsan EPONT
Alaabta alxanka Haydarooliga ugu fiican 50T
Alaab-qeybiyaha dhalada hadhida-biyoodka caadiga ah ee ugu fiican
Soosaarayaasha jaakadaha hydraulic ee takhasuska leh
Guriga > Alaabta
U SOO DIRO HALKAN U SOO DIRO HALKAN
Epont 2 Ton Double Ram Hydraulic Bottle Jack with Safety Valve marka la barbar dhigo alaabada la midka ah ee suuqa, waxay leedahay faa'iidooyin aan la qiyaasi karin marka la eego waxqabadka, tayada, muuqaalka, iwm, waxayna ku raaxaysataa sumcad wanaagsan suuqa dhexdeeda.EPONT waxay soo koobaysaa cilladaha alaabtii hore, oo si joogto ah u horumarisa. Tilmaamaha Epont Double Ram Hydraulic Bottle Jack oo leh Valve Badbaadada waxaa lagu habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahiyahaaga.
1. Goorma ayaa la aasaasay shirkadda?
La asaasay 2006dii
2.Adeecadee ayaad bixin kartaa?
Waxaan soo saareynaa jaakadaha dhalada ee kala duwan iyo jaakadda sagxadda.
3.Ma tahay shirkad toos ah wax-soo-saare ama shirkad ganacsi?
Waxaan leenahay laba aasaaska tuurista noo gaar ah iyo hal warshad CNC machining, sidoo kale waxaan leenahay our waaxda iibka caalamiga ah noo gaar ah. Anaga ayaa wax soo saara oo iibinaa dhamaanteen nafteena.
1.Shirkadu waa ururinta wiishashka kala duwan ee Engine, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack oo ah shirkad ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.
2.Our alaabta waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo etc.Our macaamiisheeda waxaa ka mid ah macaamiisha OEM badan oo ku takhasusay tareenka, baabuurta, fargeeto iyo mishiinada dhismaha. Waxaan horeyba iskaashi ula yeelanay in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn ee Shiinaha.
3.Shirkaddu waxay ku qalabaysan tahay CNC lathe, mashiinka wax lagu shiidayo, mishiinka shiida, imtixaanka culeyska taagan, mashiinka tijaabada culeyska firfircoon, tijaabiyaha Rockwell hardness tester, alxanka robot YASKAWA, farsamaynta feerka iyo qalabka tijaabinta, si ay u oggolaadaan tayada alaabta shirkadda iyo ilaalinta lagu kalsoonaan karo. godadka qaybaha muhiimka ah ee shirkadda - jack cylinder, gaar ahaan helitaanka mashiinka qodista laysarka si loo hubiyo saxnaanta achining ee meelaynta, godka xadka, si tayada wax soo saarku ay u ahayd boodbood tayo leh.
4.Shirkaddu waxay dabooshaa aag 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadanaysaa "sumcadda ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, oo ah sameynta sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican.
Ku saabsan EPONT
Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2006. Taas oo ku taal bartamaha magaalada suunka dhaqaalaha ee Yangtze webiga delta, Jiaxing, halkaas oo u dhow Shanghai, Hangzhou, Ningbo, magaalada Suzhou, iwm, taas oo aad ugu habboon gaadiidka. Shirkaddu waa ururin noocyo kala duwan oo Injineer ah, Dabaqa Jack 3T, Gudbinta Dabaqa Jack kaas oo ah shirkad jidheed oo ku takhasustay cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta. Shirkaddu waxay daboolaysaa aag ah 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadanaysaa "Reputation ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, abuurista sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican. Epont mechanical waa ururinta wiishashka kala duwan ee Engine, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack kaas oo ah shirkad u gaar ah cilmi baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.1. Waxaan leennahay shahaadooyinka: Waxaan haynaa shahaado rasmi ah2. TECHNOLOGY wax-soo-saarka: cilmi-baaris joogto ah iyo hal-abuurnimo3. Ku qanacsanaanta MACMIILKA: Bixi badeecad lagu qanco.
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag ah 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadanaysaa "Reputation ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, abuurista sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican.
Alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo etc.Our macaamiisheena waxaa ka mid ah macaamiisha OEM badan oo ku takhasusay tareenka, baabuurta, fargeeto iyo mishiinada dhismaha, waxaan Waxay horeyba ula lahayd iskaashi in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka iyagoo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
Shirkaddu waxay ku qalabaysan tahay weelka CNC, mashiinka wax lagu shiidayo, mashiinka wax lagu shiido, tijaabada culeyska joogtada ah, mashiinka tijaabada culeyska firfircoon, tijaabiyaha qallafsanaanta Rockwell, alxanka robot-ka YASKAWA, farsamaynta feerida iyo qalabka tijaabada, si loogu oggolaado shirkadda tayada wax soo saarka iyo ilaalinta la isku halleyn karo. qaybaha muhiimka ah ee shirkadda - jack cylinderen, gaar ahaan helitaanka mashiinka qodista laysarka si loo hubiyo saxnaanta achining ee meelaynta, godka xadka, si tayada wax soo saarka ayaa ah boodboodi tayo leh.
Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo ee ku saabsan qiimaha jaakadaha hawo-biyoodka
Immisa jeer ayaan heli karaa jawaab celinaha ka dib markaan u dirno waydiinta?
Waxaan kuugu soo jawaabi doonaa 12 saacadood gudahood maalinta shaqada.
Miyaad tahay shirkad toos ah wax-soo-saare ama shirkad ganacsi?
SIDEE ALAABTA NOOGU GUDBI KARAA?
Sida caadiga ah waxaanu alaabta kuugu soo dejin doonaa badda, sababtoo ah waxaan joognaa magaalada Jiaxing, iyo Shanghai, Ningbo waxaan ka fognahay 100 iyo 150 kiiloomitir, aad bay ugu habboon tahay oo hufan tahay in alaabooyinka loo diro dalal kale.
WAA MAXAY Alaabooyin aad soo bandhigi karto?
Goorma ayaa la aasaasay shirkadda?
Sanadka la dejiyay
Wadanka / gobolka
Alaabada ugu muhiimsan
Qofka sharciga ah ee shirkadda
Qiimaha wax soo saarka sanadlaha ah
Su'aalaha Inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan jaakadda sagxadaha yar yar